အော်ပရာဖွင့်မထားဘူး - တေးသံစုံကဇါတ် - 2019
အော်ပရာကိုပရိုဂရမ်များ၏တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး, သင်တန်း, အရှိဆုံးကအခြား browser များ၏ငြူစူခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် software ကိုအဘယ်သူအားမျှစစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြဿနာလုံးဝကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူး။ သူကတောင်အော်ပရာ start မည်မဟုတ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်ဘရောက်ဇာနဲ့ Opera ကို run ကြဘူးသည့်အခါဘာလုပ်ရမှန်းထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
သည်အဓိကအကြောင်းရင်းများ, Opera ကဘရောက်ဇာကိုအလုပ်မလုပ်သည်ကိုသုံးအချက်များဖြစ်နိုင်သည်တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းမှားယွင်းမှုတစ်ခုပြောင်းလဲမှု browser setting ကို, ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှိသူများအပါအဝင်တစ်ဖွဲ့လုံးက operating system ကိုအတွက်ပြဿနာတွေ။
browser ကိုမစတင်ပါဘူး, ကျွန်တော်တို့အခုအော်ပရာတစ်ခုစွမ်းဆောင်ရည်တည်ထောင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
Task Manager ကိုမှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ရပ်တန့်
ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အမြင်အာရုံနဲ့ Opera ပေမယ့်စတင်ရန်မပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခါတစ်ရံတံဆိပ် activation အပေါ်နောက်ခံအပြေးနေသည်။ ဒါကြောင့်အိုင်ကွန်ပေါ်ကလစ် နှိပ်. ပြန်လည်အခါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါရန်အတားအဆီးဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံလိုပဲကအော်ပရာနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောအခြားအစီအစဉ်များနှင့်အတူမသာဖြစ်လာတယ်။ browser ကိုဖွင့်လှစ်ရန်, ငါတို့အနေနဲ့ပြီးသား running ဖြစ်စဉ်ကို "သတ်ပစ်" ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သော့ကိုပေါင်းစပ်ကို Ctrl + Shift + Esc ကိုအသုံးပြုပြီးပွင့်လင်း Task Manager ကို။ အဆိုပါဖွင့်လှစ် window ထဲတွင် opera.exe ဖြစ်စဉ်ကိုရှာဖွေနေ။ တွေ့မပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ပြဿနာအခြားဖြေရှင်းနည်းများကိုသွားပါ။ သို့သော်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတွေ့လျှင်, right-click များနှင့်ဆက်စပ် menu ကနေ select လုပ်ပါ, သည်၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ "End Process ကို။ "
ထို့နောက်တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုအသုံးပြုသူကယ့်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်လိုလားခြင်းရှိမရှိမေးတယ်သောပေါ်လာသည်, ဤအရေးယူမှုနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးအန္တရာယ်များကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်သတိရှိရှိနဲ့ Opera ၏နောက်ခံလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းကထို့နောက် "End Process ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤ action ပြီးနောက် opera.exe Task Manager ကိုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအပြေးများ၏စာရင်းထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်နောက်တဖန် browser ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အဆိုပါအော်ပရာအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ browser ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အကယ်. ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ပြီးစီးသည် startup ပြဿနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်, အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
အားလုံးလူကြိုက်များခေတ်သစ် antivirus ကိုအတော်လေးကို browser နဲ့ Opera နှင့်အတူစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သငျသညျလျော့နည်းဘုံ anti-virus ပရိုဂရမ်ကို install လုပ်ထားတတ်လျှင်မူကား, compatibility ကိစ္စများရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့, အချိန်ပေါ် antivirus ကိုပိတ်ထားပါ။ သောနောက် browser ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, လျှင်, ထိုပြဿနာကိုဖွင့် Antivirus ကိုအတူအပြန်အလှန်တည်ရှိသည်။
anti-virus program များဖယ်ဖို့နဲ့ Opera ဘရောက်ဇာကိုထည့်ပါ။ ၏သင်တန်းတစ်ခုခြွင်းချက်ထည့်သွင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီ anti-virus program ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိကြောင်း။ Anti-virus ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုအော်ပရာစွန့်လွှတ်ခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဘရောက်ဇာကိုရွေးဖို့ဖြစ်စေ: ပြဿနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်, သင်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအော်ပရာ၏ပစ်လွှတ်ရန်အတားအဆီးလည်းဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ တချို့က malware ကိုအထူး anti-virus ကို utility ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်, ဒါမှမဟုတ်အဝေးမှကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကိုမသုံးနိုင်ခြင်း, ထို browser ကို, သူတို့ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူပိတ်ဆို့။
ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့ browser ကိုစတင်ရန်မပါဘူးဆိုရင်, သေချာပေါက် antivirus ကို အသုံးပြု. malware များအဘို့သင်၏ system စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုစံပြမူကွဲအခြားကွန်ပျူတာကနေဖန်ဆင်းတော်ဗိုင်းရပ်စ်များ, စစ်ဆေးသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
browser ကို reinstall လုပ်ဖို့: အထက်ပါနည်းလမ်းများအဘယ်သူအားမျှမကူညီခဲ့ဘူးလျှင်, ငါတို့သည်တစ်ဦးတည်းသာ option ကိုနေ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဝိသေသလက္ခဏာများ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းလမ်းထဲမှာဘရောက်ဇာကို reinstall ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်, ကဘရောက်ဇာကိုစတင်သည်ပင်ပြီးနောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
သငျသညျအော်ပရာအချက်အလက်များ၏ပြည့်စုံဖယ်ရှားရေး၏ပြန်လည် install ပြုလုပ်ရန်လျှောက်ထားချင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းအများစုကိစ္စများတွင်အခါသာမန် browser ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူပြဿနာများကိုအနည်းငယ်သာ reinstall ။ ဒီနည်းလမ်းကိုလုပ်ဖို့အဆင်မပြေအသုံးပြုသူအားလုံးသည်သင်၏အပြင်အဆင်များ, စကားဝှက်, စာညှပ်များ, နှင့်ဘရောက်ဇာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အခြားအချက်အလက်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည် install ပြုလုပ်မကူညီဘူးလျှင်မူကား, ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာနေဆဲနေဆဲဖြစ်သည်။
standard Windows tools တွေကိုအစဉ်အမြဲဖိုလ်ဒါ, halyards နှင့် registry ကို entries တွေကိုအဖြစ်အစားအစာများကို browser ကိုလှုပ်ရှားမှုကနေစနစ်၏ပြည့်စုံသန့်ရှင်းရေးမပေးနိုငျသညျ။ အမည်ရသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသငျတို့သအော်ပရာ reinstall ပြီးနောက် run နိုင်ရန်အတွက်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်ဘရောက်ဇာကို uninstall လုပ်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်များကို Uninstall ကို Tool ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူး utility ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးဝင်းဒိုးကို run လိုက်တဲ့အခါသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်များစာရင်းတစ်ခုနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လျှောက်လွှာအော်ပရာရှာနေနှင့်ဝံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူက select လုပ်နေကြသည်။ ထို့နောက် "Uninstall ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်သူကအော်ပရာစံဖယ်ရှားမှုကို program ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ သည် "အော်ပရာကိုဖျက်ပစ်ရန် user data ကို" ကို tick နှင့်ခလုတ် "Remove" ပေါ်တွင် click လုပ်ရန်သေချာစေပါ။
Uninstaller applications များအားလုံးအသုံးပြုသူ setting များကို delete ပြေး။
သို့သော်ပြီးနောက်, အကြောင်းမရှိ Uninstall ကို Tool ကိုအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါဟာအစီအစဉ်ကိုအကြွင်းအကျန်များအတွက်သင့် system စိစစ်သည်။
ကျန်နေတဲ့ဖိုလ်ဒါ, သို့မဟုတ် registry ကိုအတွက်မှတ်တမ်းများဖိုင်များကိုထောက်လှမ်း၏အမှု၌, ထို utility ကိုသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကမ်းလှမ်း။ ကျနော်တို့အဆိုပြုချက်ကိုသဘောတူလျက်, "Remove" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Next ကို, သင်စံဖယ်ရှားမှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်သမျှသောသူတို့အားအကြွင်းအကျန်ကိုဖျက်ပစ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပေါ်၌ tool ကိုဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
အခုတော့စံနည်းလမ်းနဲ့ Opera browser ကိုထားကြ၏။ ဒါဟာတပ်ဆင်ပြီးနောက်, ကစတင်ပါလိမ့်မည်, ထိုဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့သေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအော်ပရာ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, သင်ပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရှိဆုံးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေအသုံးပြုရမည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အခြားကြိုးစားမှု, ကျရှုံးအကြီးအကျယ်အစီအမံကိုသုံးပါမှသာလြှငျ - လုံးဝအားလုံး data တွေကိုဖျက်ပစ်ရန်အဘရောက်ဇာကိုပြန်စပါ။